Muzvinabhizinesi ane mukurumbira muZimbabwe nemuAfrica yose, VaStrive Taputaira Masiyiwa, vanoti pasi rose rinofanirwa kutambira chokwadi chekuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuvhiringa zvakawanda kusanganisira vanhu.
VaMasiyiwa, avo vakataura pamwe nevamwe vana muzvinabhizinesi pamusangano wakaitwa kumucheto kwemusangano weUnited Nations General Assembly, vakati vanhukadzi ndivo vari kuvhiringwa zvakanyanya nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
VaMasiyiwa, avo vanova muridzi wekambani yeEconet Wireless, vakati vanhukadzi ndivo vanoita mabasa ekurima akawanda, izvo zvinpa kuti vatarisane nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
VaMasiyiwa vakatiwo chiri kunetsa mukushandirana kwehurumnede nevemabhizimusi ndechekuti vamwe vatungamiri havadaviri kuti kwava neshanduko mune zvemamiriro ekunze.
VaMasiyiwa vakati izvi zviri kupa kuti vasakoshese gadziriro yekuderedza hukasha hwenjodzi dzaita semafashamu emvura.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muNew York, Mufundisi Peter Tembo, vanotsigira mashoko aVaMasiyiwa vachiti kana mubhaibheri zvirimo zveshanduko yemamiriro ekunze.
VaTembo vanoti vanokurudzira hurumende kuti dzishande pamwe nevemabhizimusi mukubatsirana kuderedza njodzi yedambudziko iri.
Chinangwa chemusangano uyu chainge chiri chekuzeya mushandira pamwe kwevemabhizimusi nedzihurumende mukugadzirisa matambudziko anokanganisa magariro akanaka evanhu.
Vamwe vaive pamusangano uyu vanosanganisira vakambova mutungamiri weAmerica, VaBill Clinton, muridzi wekambani yeMicrosoft, VaBill Gates, VaAlicko Dangote muzvinabhizimusi ane mukurumbira muAfrica, pamwe nevatungamiri venyika dzakatsaukana kusanganisira mutungamiri weGabon, VaAli Bongo Ondimba, nemutungamiri weGhana, Va Nana Ado Dankwa Akufo-Addo, nevamwewo.
Nyaya Ina Praxedes Jeremiah